Are big babies better? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေး ထှားတိုငျး ကောငျးရဲ့လား ???
ကလေး၀၀တုတျတုတျကွီးတှေ မှေးလာရငျ အားလုံးက ဝိုငျးခဈြကွပါတယျ။ ဝတဲ့ ကလေးတှဟော ခဈြစရာ ကောငျးတာ မှနျပါတယျ။ ခြီရ ပှရေ့တာကောငျးပွီး ကလေးကွီးကွီး မှေးတဲ့ အမေ က မကျြနှာရပါတယျ။ အမကေိုယျတိုငျလညျး ကိုယျ့ကလေးက သူမြားထကျ ကွီးနတေဲ့ အတှကျ ဝမျးသာရပါတယျ။ ကလေး ၉ပေါငျ ၁၀ပေါငျ စသဖွငျ့ ပွောရတာ အားရပါတယျ။ ဝတဲ့ ကလေးတှဟော ခဈြစရာကောငျးတာ မှနျပမေယျ့ ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့က ကွညျ့မယျဆိုရငျ မကောငျးတဲ့ အခကျြတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးကွီးကွီး နဲ့ခဈြစရာကောငျးတာ ထကျစာရငျ ကိုယျ့ကလေး ကဈြကဈြလဈလဈ နဲ့ ရောဂါကငျးပွီး ကနျြးမာတာမြိုး က ပိုကောငျးပါတယျ။
ကလေးကွီးကွီး မှေးနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ အမေ မှာ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ဆီးခြိုတကျခွငျး၊ နဂိုတညျးက ဆီးခြို ရောဂါ ရှိခွငျး နဲ့ အမေ ရဲ့ အစားအသောကျ ကနျြးမာရေး နဲ့ မညီညှတျခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ဆီးခြိုတကျတာဟာ ကလေးကို ပါ ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ကလေးဆီကို အခငျြးမှ တဈဆငျ့ ရောကျတဲ့ သှေးထဲမှာ သကွားဓာတျတှေ မြားနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးဟာ အခြိုမြားတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွီးပွငျးလာရပါတယျ။ အခြိုဓာတျကို သုံးစှဲမှု မြားတာကွောငျ့ ကလေးဟာ ကွီးလာပါတယျ။ တနညျးပွောရရငျ ကလေးဟာ မမှေးခငျ ကတညျးက အဝလှနျနပေါတယျ။ အဝလှနျတာဟာ ကလေးမှာရော လူကွီးမှာပါ လုံးဝမကောငျးပါဘူး။ နောကျဆကျတှဲ ရောဂါတှေ အမြားကွီးဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုရှိတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျတှေ အနနေဲ့ ဆီးခြိုကို တငျးတငျးကပျြကပျြ ထိနျးရပါမယျ။
နောကျတဈခကျြကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျ အမကေ ဆီးခြို မတကျဘဲနဲ့ ကလေးက အဝလှနျနတောမြိုးပါ။ ဒါကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျ အမေ ရဲ့ အစားအသောကျနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ ကာလတဈလြှောကျမှာ အခြိုဓာတျမြားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ အဆီမြားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ ဆီကွျောတှေ၊ ရယျဒီမိတျ အစားအစာတှေ၊ အပွငျစာ အသငျ့စား အစားအသောကျတှေ နဲ့ အခြိုရညျ ကျောဖီမဈတှေ စားသုံးတာ မြားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ကစီဓာတျနဲ့ အဆီ၊ အခြို မြားသှားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးကို ထှားစခေငျြတဲ့ ဇောနဲ့အလှနျအကြှံစားတာမြိုး ရှောငျပါ။ ကိုယျ့ကလေးက ဝနစေရာ မလိုပါဘူး။ ကဈြကဈြလဈလဈနဲ့ အာဟာရ ပွညျ့နရေငျ ရပါပွီ။ ဝတဲ့ ကလေးဟာ ရောဂါ ထူပါတယျ။
ဒီလို ကလေးကွီးကွီးတှေ မှေးလာရငျ တျောတျော သတိထားရပါတယျ။ သူတို့ဟာ အမဗေို့ကျထဲမှာ အခြိုဓာတျမြားမြား ရပွီးနလောရတော့ အပွငျရောကျတဲ့ အခါ အခြိုဓာတျ ခကျြခငျြး မရရငျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ ကတြာ မြိူး ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးကွီးကွီး တှေ မှေးရငျ မှေးပွီးပွီးခငျြး သှေးတှငျးသကွားဓာတျ ဖောကျစဈရပါတယျ။ မှေးပွီးနာရီဝကျ အတှငျး မိခငျနို့တိုကျရပါမယျ။ နောကျထကျ အခြိနျတိုငျး စောငျ့ကွညျ့ပွီး လိုအပျသလို သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို စဈဆေးရပါမယျ။ သှေးတှငျး သကွားဓာတျကတြာဟာကလေးကို အသကျအန်တာရာယျရှိတဲ့ အထိ ဖွဈစတေတျပါတယျ။
ကလေးကွီးကွီး မှေးလာရငျ မိခငျနို့ကို အသကျ ၆လ အထိ အပွညျ့ အဝတိုကျပါ။ ကလေး အသကျ ၂ နှဈထိ မဖွဈမနေ ဆကျတိုကျပါ။ အမေ က ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာကို ရှေးခယျြစားသုံးပါ။ ကလေးကို အဝလှနျခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါ။ ဒါမှ ကလေး ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ကွီးပွငျးလာပွီး ရောဂါ ဘယကငျးဝေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှေ အဝလှနျတာဟာ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆီးခြို၊ သှေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါ ကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အလှနျကွောကျစရာ ကောငျးတဲ့ ရောဂါတှဖွေဈတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ကတညျးက ကာဖှယျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးကွီးတာ အဝလှနျနတော ထကျ ကဈြကဈြလဈလဈ နဲ့ ကနျြးမာတဲ့ ကလေးတှေ က ပိုကောငျးတယျလို့ပွောပါရစေ။
ကနျြးမာပြျောရှငျသော ကလေးငယျမြား အတှကျ။
ကလေး ထွားတိုင်း ကောင်းရဲ့လား ???
ကလေး၀၀တုတ်တုတ်ကြီးတွေ မွေးလာရင် အားလုံးက ၀ိုင်းချစ်ကြပါတယ်။ ၀တဲ့ ကလေးတွေဟာ ချစ်စရာ ကောင်းတာ မှန်ပါတယ်။ ချီရ ပွေ့ ရတာကောင်းပြီး ကလေးကြီးကြီး မွေးတဲ့ အမေ က မျက်နှာရပါတယ်။ အမေကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ကလေးက သူများထက် ကြီးနေတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာရပါတယ်။ ကလေး ၉ပေါင် ၁၀ပေါင် စသဖြင့် ပြောရတာ အားရပါတယ်။ ၀တဲ့ ကလေးတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကြီးကြီး နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာ ထက်စာရင် ကိုယ့်ကလေး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် နဲ့ရောဂါကင်းပြီး ကျန်းမာတာမျိုး က ပိုကောင်းပါတယ်။
ကလေးကြီးကြီး မွေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အမေ မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုတက်ခြင်း၊ နဂိုတည်းက ဆီးချို ရောဂါ ရှိခြင်း နဲ့အမေ ရဲ့အစားအသောက် ကျန်းမာရေး နဲ့မညီညွတ်ခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုတက်တာဟာ ကလေးကို ပါ ထိခိ်ုက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးဆီကို အချင်းမှ တစ်ဆင့် ရောက်တဲ့ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်တွေ များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးဟာ အချိုများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာရပါတယ်။ အချိုဓာတ်ကို သုံးစွဲမှု များတာကြောင့် ကလေးဟာ ကြီးလာပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ကလေးဟာ မမွေးခင် ကတည်းက အ၀လွန်နေပါတယ်။ အ၀လွန်တာဟာ ကလေးမှာရော လူကြီးမှာပါ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ဆီးချိုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းရပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမေက ဆီးချို မတက်ဘဲနဲ့ကလေးက အ၀လွန်နေတာမျိုးပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမေ ရဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတစ်လျှောက်မှာ အချိုဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆီကြော်တွေ၊ ရယ်ဒီမိတ် အစားအစာတွေ၊ အပြင်စာ အသင့်စား အစားအသောက်တွေ နဲ့အချိုရည် ကော်ဖီမစ်တွေ စားသုံးတာ များတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကစီဓာတ်နဲ့အဆီ၊ အချို များသွားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ထွားစေချင်တဲ့ ဇောနဲ့ အလွန်အကျွံစားတာမျိုး ရှောင်ပါ။ ကိုယ့်ကလေးက ၀နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့အာဟာရ ပြည့်နေရင် ရပါပြီ။ ၀တဲ့ ကလေးဟာ ရောဂါ ထူပါတယ်။
ဒီလို ကလေးကြီးကြီးတွေ မွေးလာရင် တော်တော် သတိထားရပါတယ်။ သူတို့ ဟာ အမေ့ဗိုက်ထဲမှာ အချိုဓာတ်များများ ရပြီးနေလာရတော့ အပြင်ရောက်တဲ့ အခါ အချိုဓာတ် ချက်ချင်း မရရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျတာ မျိူး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကြီးကြီး တွေ မွေးရင် မွေးပြီးပြီးချင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ဖောက်စစ်ရပါတယ်။ မွေးပြီးနာရီဝက် အတွင်း မိခင်နို့ တိုက်ရပါမယ်။ နောက်ထက် အချိန်တိုင်း စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို စစ်ဆေးရပါမယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကျတာဟာကလေးကို အသက်အန္တာရာယ်ရှိတဲ့ အထိ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ကလေးကြီးကြီး မွေးလာရင် မိခင်နို့ ကို အသက် ၆လ အထိ အပြည့် အ၀တိုက်ပါ။ ကလေး အသက် ၂ နှစ်ထိ မဖြစ်မနေ ဆက်တိုက်ပါ။ အမေ က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ ကလေးကို အ၀လွန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါ။ ဒါမှ ကလေး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကြီးပြင်းလာပြီး ရောဂါ ဘယကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အ၀လွန်တာဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆီးချို၊ သွေးတိုးနဲ့နှလုံးရောဂါ ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကတည်းက ကာဖွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကြီးတာ အ၀လွန်နေတာ ထက် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် နဲ့ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတွေ က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ကလေးငယ်များ အတွက်။